ကိုယ့်ဇနီးအပေါ်မှာသစ္စာရှိပါ……. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကိုယ့်ဇနီးအပေါ်မှာသစ္စာရှိပါ…….
Posted by chityimhtoo on Feb 17, 2012 in Copy/Paste | 18 comments
အမျိုးသား – ကျွန်တော်ကအိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို
ရူးရူးမူးမူး ချစ်မိနေတယ်။ အဲဒါဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။
အတိုင်ပင်ခံ – ဒီမိန်းကလေးဟာ သင့်ဘ၀အတွက် နောက်ဆုံး ချစ်နိုင်တဲ့
အမျိုးသား – ဒါပေမဲ့ ခုလက်ရှိမိန်းမက နားလည်ပေးတယ် သည်းခံတယ် တော်တယ်။
ကျွန်တော်ဒီလို လုပ်ရင် သူ့အတွက် ရက်စက်ရာ ကျမလား။
အတိုင်ပင်ခံ – အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ တရားတယ် ရက်စက်တယ်လို့ ဆိုတာတွေ မရှိပါဘူး။ ခု
အမျိုးသား – ကွာရှင်းပြီး တခြားမိန်းကလေးကို လက်ထက်လိုက်ရင်
အတိုင်ပင်ခံ – အိမ်ထောင်အရပြောရရင် မင်းကို ချစ်နေတဲ့ အချစ်ကို သူမ
ပိုင်ဆိုင်နေမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအိမ်ထောင် မှာ မင်းက သူ့ကို ချစ်တဲ့ အချစ် မင်းမှာ
မရှိတော့ဘူး။ မင်းက တခြားတစ်ယောက်ကို မင်းရဲ့အချစ်တွေပေးလိုက်လို့။ မင်း သူ့ကို
မချစ်တော့တဲ့ အတွက် မင်းဆုံးရှုံးနေတာ နာကျင်မှာ မင်းပဲ။
အမျိုးသား – ကျွန်တော် နောက်တစ်ယောက်နဲ့ ပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်သစ်ကို
အစပြုတော့မှာ။ သူ့ ကျွန်တော့်ကို ဆုံးရှုံးတာ။
အတိုင်ပင်ခံ – မင်းမှားနေပြီ။ သူမ က ဒီအိမ်ထောင်မှာ ဒီအချစ်စစ် တစ်ခုနဲ့
သူလျှောက်လှမ်းနေတာ။ သူ့ရဲ့ အချစ်စစ်ကို သူပေးဆပ်တယ်။ သူ ပျော်တယ်။ မင်းသာ
မင်းကို အချစ်စစ်နဲ့ ချစ်နေတဲ့သူကို မင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမှာ။
အမျိုးသား – သူမပြောဖူးတယ်။ သူမက ကျွန်တော်ကလွဲပြီး တခြားတစ်ယောက်ကို
အတိုင်ပင်ခံ – မင်းရှေ့ကီဖယောင်းတိုင် ၃ တိုင်ကို ကြည့်လိုက်။ ဘယ်ဟာ
အတိုင်ပင်ခံ – ဒီဖယောင်းတိုင် ၃ တိုင်သာ မိန်းကလေး ၃ ယောက်ကို
ကိုယ်စားပြုနေမယ်ဆိုရင် ဒီ လူ့လောကမှာ မရေမတွက်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရှိတယ်။
ဒီ ၃ တိုင်တောင် ဘယ်တိုင်က ပို လင်းပြီး တောက်ပ နေတယ်ဆိုတာ မင်းမပြောနိုင်ဘူး။
အခု မင်းချစ်နေတဲ့ တစ်ယောက်က မင်းရဲ့ နောက်ဆုံးချစ်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာကို
အတိုင်ပင်ခံ – မင်း အခု ဖယောင်းတိုင်တစ်တိုင်ကို မင်းယူလိုက်။ မင်းစိတ်နဲ့
ကြည့်လိုက် ဘယ်အတိုင် အလင်းဆုံးလဲ။
အတိုင်ပင်ခံ – မင်းခုနက ယူလိုက်တဲ့ ဖယောင်းတိုင်က မင်းလက်ရှိ မိန်းမကို
ကိုယ်စားပြုမယ်ဆိုရင် အချစ်ဆိုတာ ရင်ထဲက ဖြစ်လာတဲ့ အတွက် မင်း သူ့ကို ချစ်နေရင်
မင်းစိတ်ထဲမှာ သူဟာအလင်းဆုံး မင်းသာ သူ့ကို စိတ်ထဲမှာ မထားဘူး
နဂိုနေရာမှာဆိုရင် မင်းစိတ်ထဲကို မထည့်တဲ့ အတွက် အလင်းဆုံးကို မင်းတွေ့မှာ
မဟုတ်ဘူး။ ချစ်တယ် မချစ်တယ် ဆိုတာ မင်းရဲ့ စိတ်ပါပဲ။
အမျိုးသား – အော်။ ကျွန်တော်နားလည်ပါပြီ။ တကယ်ကွာရှင်းခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးလား။
လမ်းမှန်ကို ရောက်အောင် လမ်းညွန်ပြနေတာပါလား။
အတိုင်ပင်ခံ – ကယ် နားလည်ပြီဆိုရင် မင်းရဲ့ စိတ်နဲ့ အလင်းဆုံး
ဖယောင်းတိုင်တစ်တိုင်ကို မင်းစိတ်နဲ့ သွားရှာတော့…..
အမျိုးသား – ကျွန်တော် ရင်ထဲမှာ ဘယ်သူအလင်းဆုံးလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော်သိပြီ။
ဒီ လူ့လောကကြီးမှာ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတဲ့ တံတိုင်းကြီးပေါ့… တံတိုင်းထဲ နဲ့
အပြင်မှာ ရှိနေတဲ့ သူတွေက အထဲဝင်ချင် အထဲမှာရှိတဲ့ သူက အပြင်ထွက်ချင်။ အထဲမှာ
ရှိတဲ့ သူတွေကလဲ အပြင်ဘက်က ရူ့ခင်းတွေကို ကြည့်ချင်။ ရထား
ပိုင်ဆိုင်ထားတာတွေနဲ့ မကျေနပ်ကြဘူး။ မရောင့်ရဲကြဘူး။ မိုးပေါ်ကကြယ်လေးတွေ
လင်းလက်နေတာကို မက်မောကြတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်မှာ နွေးထွေးတဲ့ ဟင်းနဲ့
စောင့်နေတာကို မမြင်ကြဘူး။ သာမာန်ရိုးကျ နေ့စဉ်လုပ်ရပ်တွေကို ငြီးငွေ့လာတယ်။
အချစ်သစ်ရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို မက်မောလာတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကို
အဝေးမှာပဲ ထင်ပြီး နောက်တစ်ယောက် လာခေါ်ဆောင်မှုကို စောင့်စားနေတယ်။.
နောက်တစ်ယောက်ကြောင့် ဘ၀ဟာ စိုပြေလာတယ်လို့ ထင်လာတယ်…. ဒါကို သင်က
တစ်ချို့အရာတွေက မသိစိတ်ကနေ စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်… စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်လာတဲ့
အတိုင်း လုပ်ကြတယ်….. ဒီလိုနဲ့ ပဲ ဖေါက်ပြန်မှုတွေက များပြားလာတော့တာပေါ့…….
ရေးသားသူ – အိမ့်ရတနာချစ်
အိမ်ထောင်ကျပြီးရင် ကြုံတွေ့ရမဲ့ ပြသာနာဗျ
အချစ် အချစ် အချစ် မရှိမကောင်း ရှိမကောင်း။
သူကြီးရေ ကိုချစ်ရင်ထူးရဲ့ စေတနာနော်။
လောလောဆယ် ကျနော်က မိန်းမ မရသေးတော့
ဒါဖတ်ပြီးမှ အသိတရားတွေ ရခဲ့ပါပြီဗျာ
ခင်ဗျားအသက်က သေခါနီးဖင်မွှေးဖြူဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ဖြစ်နေတာ နောက်မီးက လင်းချင်သေးလို့ လားဗျ
ဟိုက် ကိုရင် ကျနော်အဲလောက်အိုသေးဘူးနော်။ကျနော့် ပြောတာလားဟင်။
တစ်ချို့လူတွေ ပထမမိန်းမကို ကွာရှင်းပြီးနောက်အိမ်ထောင်ပြုသွားတာမြင်တော့
လူတစ်ယောက်က ခဲရာခဲဆစ်ရှာဖွေကျွေးတယ် အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မိန်းမက အပြောကြမ်းကြမ်းတွေပြောတယ်၊ လင်ကိုပြုစုတာလည်း မရှိဘူး
အဲ့ဒီမှာ ဒီလူက နောက်မိန်းမယူလိုက်တာတွေ့၇တယ်
နောက်အိမ်ထောင်က အပြောလည်းချိုတယ် စရိုက်လည်းကောင်းတယ်
သူ့ဇနီးဟောင်းကလည်း နောက်အိမ်ထောင်ပြုတယ် အရက်သမားနဲ့ ညားတာပါ
ညနေဆို မူးပြီးသူဆဲကိုယ်ဆဲပဲ ဆူညံနေတာပေါ့
ရိုက်တာလည်း ခံရပါတယ် အဲ့ဒီမိန်းမကပြောတယ် အခုမှ စိတ်ကြိုက်တွေ့တာတဲ့
ဆရာကိုထက်ဝေးရဲ့ အတွေ့ အကြုံ ဥပမာလေးက အရက်ကြိုက်တဲ့ရွာထဲက အကိုကြီးတွေ
ကိုယ်တွေ့ နဲ့ ထပ်တူကျနေပါမယ်။ဟီးးးး just kidding နော်
ဖောက်ပြန်တော့လည်း မိန်းမပေါ် မတရားတာဖြစ်အုံးမယ် မဖောက်ပြန်တော့လည်း အသစ်လေးတွေမသုံးရတော့ ခေတ်နောက်ကျပြန်ရော မယူပဲ ချိုင့်ဆွဲလေးပဲကောင်းပါတယ်
ဒီပို့ စ်ပြီးအောင်ဖတ်မိတာကိုက ငါ့အမှား
better, i didn’t read for this post.
Now, i don’t know how to carry out, all are in process.
နယ်တကာလှည့်ပြီးတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေရတော့တွေ့ကြုံရတာလေးတွေ မျှဝေပေးချင်တယ် မှန်မမှန်တော့မသိဘူးပေါ့ မှားရင်ခွင့်လွတ်ပေးကြပါနော်။ တစ်ခါကရိုးသားပြီးတာဝန်ကိုလေးစားတတ်တဲ့ အရာရှိကြီးတစ်ယောက်မှာ ခင်ပွန်းအပေါ် အနစ်နာခံပြီး ပင်ပန်းတယ်လို့မထင်ဘဲပျော်ပျော်ကြီးပါရမီဖြည့်
တဲ့မိသားစုလေးမှာတစ်ခုလပ်ကလေး၂် ယောာက်အမေတယောက်အကူအညီတောင်းရာမှမတွယ်သင့်တဲ့သံယောဇဉ်လားဘာလားမသိတဲ့ ဖောက်ပြန်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ကိုယ်ထက်၂၀ ကျော်ငယ်တဲ့
ရိုးသားစွာတာဝန်ထမ်းခဲ့လို့ မချမ်းသာတဲ့မိသားစုလေးအခြေအနေကို ရွာသားတွေခန့်မှန်းနိုင်မယ်ထင်ပါ
မေးလျှောက်တော့အန်တီကြီးက ဟိုးအရင်ဘ၀က မ်ိမိမိန်းမအပေါ်သစ္စာမဲနှိပ်စက့်ပြီးနောက်မိန်းမနဲ့ပျော်
အလွန်ကောင်းတဲ့ပို့စ်ပါပဲ … ။
ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသား အရာကို စိတ်ဝင်စားမှု အားနည်းတာ … တန်ဖိုးထားမှု အားနည်းတာ … ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပေမယ့် … အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ … ခွင့်မလွှတ်သင့်တဲ့အပြုမူပါပဲ … ။
အိမ်ထောင်မပြုခင်သာ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်သင့်ပေမယ့် .. အိမ်ထောင်ပြုပြီးလျှင်တော့ …. အလွယ်တကူကွာရှင်းတာမျိုး မဖြစ်သင့်ပါဘူး … ။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံး ကိုယ်စီနစ်နာမှုတွေကျန်ရစ်ခဲ့လို့ပါပဲ … ။
ဘယ်သူ့ဘက်က ချို့ယွင်းချက်ရှိလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ အတတ်နိုင်ဆုံးညှိယူသင့်ပါတယ် … ။
ကျွန်မကတော့ .. တစ်လင် တစ်မယားစနစ်ကိုပဲ အားပေးတယ် … ။ ကဲချင် ရှုပ်ချင် .. မိသားစုဘ၀ မလိုချင်လျှင် မယူပဲနေ .. (ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အပြောဆိုတော့ ခံနိုင်ရဲရမယ်နော် … ) … ရထားတဲ့ မိသားစုဘ၀လေးကိုတော့ … မာနတွေ ၊ အထာမကျတွေကြောင့် .. အပျက်ဆီးမခံသင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ် … ။ :cool:
ဒီပို့လေးကိုတင်ပေးတဲ့ ချစ်ရင်ထူးကို မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်…ဒီပို့လေးကို အိမ်ထောင်ပြုမယ့် အမျိုးသားတိုင်းနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီးသား အမျိုးသားတိုင်းဖတ်သင့်တယ် ဒါမျိုးအဖြစ်တွေကလူ 100မှာ 90လောက်က အပြင်မှာတစ်ကယ်မဟုတ်ရင်တောင် စိတ်နဲ့တောင် ဖောက်ပြန်ချင်ပြန်နေလိမ့်မယ် အဲလို အချိန်မျိုးမှာ မိမိရဲ့လက်တွဲဖော်ဟာ မိမိအပေါ် တစ်ကယ့်ကိုကောင်းခဲ့တဲ့အကွက်လေးတွေကို မြင်ယောင်နေစေချင်တယ်… အိမ်ထောင်တစ်ခုကို တည်ထောင်ပြီး ပြန်ဖျက်ဖို့ဆိုတာလည်း ခက်ခဲပါတယ် နောက်အိမ်ထောင်တစ်ခုတည်ထောင်တဲ့အခါမှာလည်း နောက်အိမ်ထောင်က မကောင်းခဲ့ရင် ကိုယ်ကရှေ့က မိန်းမကိုသတိရ ကိုယ့်အမှားတွေအတွက် ရင်စည်းပြီးခံနေရပါလိမ့်မယ် မေတ္တာမှန်တဲ့ မိန်းမကိုထားခဲ့တဲ့ယောက်ျားတွေက မေတ္တာဆူးပါလိမ့်မယ်……ချွင်းချက် သစ္စာရှိသော မိန်းမများအားလုံးရဲ့ မိမိချစ်ခင်ပွန်းများ ခြေလှမ်းမှားချင်ရင် ဒီပို့လေးကိုတွေ့မြင်ပြီး ဆင်ခြင်နိုင်ပါစေ …
တဦးပေါ်တဦးမေတ္တာလွှမ်းခြုံထားလို့ သာယာစိုပြေတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို
ကြေညာ ဝင်တာပါဗျို့ ။ဟီး